Yini LED ume?
LED imfushane for diode ukukhanya-likhipha.
musa LED uzothatha isikhathi esingakanani?
LED Okwaphawuleka ngokuba imikhiqizo kakhulu nehlala njalo. LED abaningi babe nokuphila ukalwe afinyelela kwangu-50,000. Lena cishe izikhathi ezingaphezu kuka-50 umuntu esikhipha ejwayelekile, isikhathi eside izikhathi 20-25 ngaphandle Halogen ejwayelekile, kanye 8-10 ibe yinde ukwedlula CFL ejwayelekile. Isetshenziswa amahora angu-12 ngosuku, a 50,000 isibani izothatha iminyaka engaphezu kwengu-11. Kusetshenziswe emahoreni angu-8 ngosuku lona, ​​liyokuma engu-17!
Kukuphi lapho ungehlisa khona LED ingasetshenziswa?
Zingasetshenziswa cishe noma kuphi. akumiselelwa LED kakade etholakalayo isibani izinhlobo ezifana A-ukuma, PAR reflectors, MR reflectors, zokuhlobisa, undercabinet, nokuningi. Lapho esetshenziswa ku dimmers, izinhlelo ikakhulukazi dimming ukuthi ukusekela ama eziningi, siphakamisa ukuhlola LED ambalwa wokuqala bayafanelana.
Yiziphi izinzuzo ashintshele LED?
Izinzuzo ashintshele LED baningi. Nazi nje ezinye izinzuzo: LED ukusebenzisa ugesi ingasaphathwa kunamanye ama, babe kakhulu ezimpilweni eside wazikala ukushisa kancane kakhulu, bungakhiphi UV noma infrared, lingabe mercury amelana ukwethusa vibration, futhi kungaba isebenze kahle ezindaweni ezibandayo kakhulu. Ukuze uthole olunye ulwazi izinzuzo LED,
Kungani LED ibize ngaphezu kuka nezinye izinhlobo ama? Aziyona yini na?
LED namanje ubuchwepheshe obusha, futhi izindleko zokwelapha esikhiqiza umkhiqizo izinga namanje okusezingeni eliphezulu. Nokho, ukubekwa kwentengo wehlele kakhulu kusukela eminyakeni embalwa edlule futhi amanani Kulindeleke ukuba iqhubeke ungazenzi. Ngokuya ukuthi LED iwufanele zindleko ezengeziwe, kuyasiza ukubheka izindleko ukuqhuba isibani ngaphezu ephezulu futhi ephambili izindleko. Le imali namandla yaqaphela inkinobho ukuze LED kusho ukuthi ngokuvamile extra ephezulu futhi ephambili izindleko ikhokhelwa emuva kunalokho ngokushesha, futhi uzoba avale ukonga imali ngokuhamba kwesikhathi ekuphileni isibani. Nasi isibonelo: i-ikhasimende zokuhlala abangase babe ukukhanya oku amahora 10 ngesonto ñ le payback kweminyaka engaphezu kwengu-10. Ngakolunye uhlangothi, iklayenti okudayisa noma yokudlela ngubani kuyalivuthela izibani amahora 90-100 ngeliviki ngeke ukubala payback yabo $ 70 LED PAR ukuba esingaphansi kwezinyanga 18. Ukuthatha sibheke payback yakho ukulinganisela kufanele nakanjani kube ukucabangela lapho sinquma uma LED kuyinto ekufanele.
Ingabe bukhona ngempela umehluko phakathi $ 10 LED kanye $ 50 LED?
Yebo. LED zifana kakhulu umthengi electronics kanye nekhwalithi okubaluleke ngempela. Ukuze i-LED usebenze kahle futhi unikeze okukhipha eyamukelekayo ukukhanya, zonke izingxenye kufanele kwakhelwe ukuhlala isikhathi eside. Kuba njalo kuwumqondo omuhle ukuthenga kusuka nomkhiqizi futhi umthengisi ukuthi uqinisekile ngeke ume ngemuva umkhiqizo. Uma ungathanda ukufunda okwengeziwe mayelana izingxenye nendlela elishibhile ezenziwe LED beka yamelana umkhiqizo top-izinga,
Ingabe i-LED izogila ukukhanya okwanele ukuze esikhundleni isibani lwami lwamanje?
Ukuze izicelo eziningi, yebo. Ayiqoshwa eshalofini imikhiqizo LED manje thembeke esikhundleni okulingana esikhipha Watts 100, kanye nemikhiqizo okukhethekile ayatholakala esikhundleni wattages ngisho ephakeme.
Yini izinga LED ukukhanya?
Uma uthenga umkhiqizo izinga, ikhwalithi ukukhanya kuyinto enhle kakhulu. Umbala Rendering Inkomba (CRI) ngokuvamile esetshenziselwa ukukala izinga ukukhanya ngezinga elingelikhulu ukusuka 1-100. LED amaningi anesimiso isilinganiso CRI okungenani 80, futhi abaningi ukalwe 90 nangaphezulu.
LED ahlaza kakhulu. Okokuqala, basebenzisa ugesi omningi esingaphansi neminye imikhiqizo eminingi ukukhanyisa. Lokhu kusho ukuthi ugesi kancane kufanele ekhiqizwa isebenze nabo, okuholela kwekhabhoni aphansi kusuka izitshalo amandla, ikakhulukazi ezindaweni lapho izitshalo amalahle ngamalahle zivamile. Ngokungafani CFLs, akukho mercury. Ngenxa yokuphila lwabo olude, futhi kuncishiswe ukungcola okuqinile: Uma ushintsha isibani esikhipha nge LED, wena uyobe ukuvimbela amahlanu 1,000 ihora incandescent ama ekubeni ziyalahlwa. Ngaphezu kwalokho, ukushisa kancane kakhulu futhi kunganciphisa ukusetshenziswa amandla ezihlobene HVAC. I-US Department of Energy uye Kulinganiselwa ukuthi ukwamukelwa anda LED eminyakeni 15 alandelayo futhi ukunciphisa izimfuno ugesi kusukela ukukhanyisa ngamaphesenti angu 62, ukuvimbela kwezigidi ezingu-258 amathani imethrikhi carbon emkhathini, futhi asikho isidingo 133 izitshalo ezintsha amandla.
Can LED ingasetshenziswa ne dimmers?
Ngokuvamile, yebo. LED Abaningi ngqo ohlwini kokuba dimmable. Ezinye izinhlelo Ukufiphala sisebenze LED ngcono kunabanye, ngakho-ke kungcono ukuthi luhlole elilodwa noma amabili ngaphambi kokuba ngokuphelele kabusha lamping isikhala.
Kufanele LED lisetshenziswe zalapho okuvalelwe?
Hhayi uma okuvalelwe ngokuphelele. Ukuze i-LED usebenze ngendlela efanele, kumelwe babe abaphile lwemidlalo non-elapha emvilophini Allo